Nwa amaala Saint Lucia site na Saint Lucia Canelles Resort Share
The hotel share is for sale maka inweta amaala nke Saint Lucia
St. Lucia Canelles Resort ga-apụta ngwa ngwa dị ka ebe dị mkpa maka oge ezumike na itinye ego. Etinye ego na ebe ezumike na Saint Lucia Canelles.
Saint Lucia Canelles Resort bụ ebe ezumike dị oke ọnụ. Ebe ezumike a nwere ụdị abụọ, Nrọ na Zoetry, na Canelles Oceanfront ,lọ, nke na-enye ndị di na nwunye na ndị di na nwunye nwere ụmụ okomoko ezigbo ebe dị n'akụkụ oke osimiri. Na ime ụlọ sara mbara na oke ime ụlọ, nke ejikere mara mma ma chọọkwa mma, ọ ga-enye ezumike zuru oke yana ọrụ enyi na mmekọrịta ịhụnanya.
Ọ na-enyekwa ohere spa pụrụ iche ebe akọwapụtara ịdị mma karịa izu ike na ọgwụgwọ. Ebe ntụrụndụ anyị na-enyekwa ohere pụrụ iche isonye na ọdịbendị, nka, agụmakwụkwọ na ime obodo.
Etinye ego na Saint Lucia
St. Lucia Canelles Resort ga-apụta ngwa ngwa dị ka ebe dị mkpa maka oge ezumike na itinye ego.
Mgbe ejiri ya na Saint Lucia Citizenship site na Mmemme Mmemme, ọ na-enye gị ohere ịnweta nnabata nke abụọ site na itinye ego, yana nchekwa dị ukwuu maka gị na ndị ezinụlọ gị, yana ọtụtụ uru ndị ọzọ bara uru. Onye anamachọ aghaghi ibinye aka nzi ahia na ire ire maka itinye ego nke ihe kariri US $ 300 n’ime oru ngo ulo oru akwadoro.